Shiinaha Antminer S19 - 95THs warshad iyo soosaarayaasha | Tianqi
Daawaha: 95TH / s
Taariikhda rarida: 1-31, Oktoobar 2020
Qaabka LambarAlgorithm algorithm
Awooda darbiga @ 25 ° C, Watt
Waxtarka awoodda darbiga @ 25 ° C, J / TH
Qalabka korantada AC Qalabka korantada, Volt (1-1)
Qalabka korantada AC Range Frequency Range, Hz
Cabbirka Miner (Dhererka * Ballaca * Dhererka, oo baakad leh), mm
Heerkulka hawlgalka, ° C
Heerkulka kaydinta, ° C
Joogitaanka hawlgalka, m (3-1)
Hore: Antminer S17e-60THs
Xiga: Antminer T17 + 58THs
1. Qeexitaannada iyo macluumaadka kale ee Antminer S19 waa sida ku xusan Guudmarka qaybta.
2. Rarista qaybtani waxay ku bilaabmi doontaa markabkii ugu horreeyay ee markabka la bixiyo ee ugu horreeya ee amarrada ay Bitmain heshay lacag bixin buuxda. Waxaan kugula talineynaa inaad ka feejignaato siyaasadaha nadiifinta kastamka ee deegaankaaga oo aad u sii diyaar garowdo waqtiga ka hor si looga fogaado wixii dib u dhigista kastamka ah ama kharashyada lama filaanka ah.
3. Fadlan si naxariis leh u fiirso in korontada ay qayb ka tahay S19.
4. Fadlan si naxariis leh u fiirso in danab gelinta loo baahan yahay ee S19 ay tahay 220V.
5. Fadlan xulo cinwaanka saxda ah ee rarka kahor intaadan gudbin amarkaaga. Dufcadan, cinwaanka dhoofinta lama beddeli karo markii amarka la gudbiyo.
6. Shixnadaha loo dirayo Mareykanka, sida ku cad xukunka NY ee N297495, mashiinka macdanta waxaa lagu sifeeyay hoosta 8543.70.9960 oo ka kooban 2.6% canshuur iyo 25% dheeraad ah oo lagala soo degayo si waafaqsan shuruudaha iyo xaaladaha Sino-US.
7. Shixnadaha Jarmalka, fadlan la soco in aan leenahay macaamiil fara badan oo Jarmal ah oo la kulmay dhibaatooyinka kala-bixinta kastamka markii shixnadaha loo soo marsiiyay DHL. Waxaad rabi kartaa inaad tixgeliso macluumaadkan ka hor intaan la go'aaminin side xamuulka. Haddii ay dhacdo dib-u-dhac kasta oo soo noqnoqod ah ama soo-celinta shixnad ay sabab u tahay rarka DHL, Bitmain mas'uul kama noqon doonto.
8. Fadlan halkan guji si loo tixraaco dhammaan shahaadooyinka alaabada. Fadlan cilmi baaris ku samee shuruudahaaga gaarka ah ee deegaanka ka hor intaadan ka iibsan Bitmain. Xaaladda dib u dhac kasta oo caado ah ama soo noqoshada shixnad sababtoo ah la'aanta shahaadada, Bitmain mas'uul kama noqon doonto.
9. Si loo hubiyo xaqiiqada, tayada sare iyo caymiska buuxa ee alaabada aad naga iibsato, Waxaan si xoog leh u soo jeedinaynaa inaad ka iibsato websaydhkayaga rasmiga ah (www.bitmain.com) anaguna waxaan kaligeen mas'uul ka noqon doonaa alaabada laga soo iibsado sarkaalkeena. bogga Fadlan garwaaqso inaynaan haysan wax qaybiyaha saddexaad iyo kuwa wax iibiya oo idman gobol kasta ama waddan kasta. Uma oggolaan doonno inay badeecadeenna ku iibiyaan shaqsiyaad taleefan, emayl ama qaabab kale. Waxay noqon kartaa khiyaano haddii aad amarka siiso qof sheeganaya inuu yahay wakiilka rasmiga ah ee iibinta Bitmain ama u qaybiye email ama Skype ama degello kale oo aan ka ahayn degelkeena rasmiga ah (www.bitmain.com). Dhacdo kasta masuul kama noqon doono wixii khasaaro ama waxyeelo ah ee ka dhasha khiyaanooyinka dhinacyada saddexaad. Shuruudaha iyo shuruudaha alaabadayada iibinta ee ku taal bogga rasmiga ah ayaa ah nooca kaliya ee qasab ku ah mana ku dhici doonno dhacdo kasta oo la mid ah shuruudaha la doorbido ee ay bixiyaan qaybiyaha kale ee rukhsad iyo iibiye kale ah.
10. Sawirada la soo bandhigay waa tixraac kaliya, nooca rarka ugu dambeeya ayaa guuleysan doona.
11. Fadlan ogow in asalka mashiinka macdanta ee ku dul qoran la cusbooneysiin doono iyadoo loo eegayo hagaajinta warshadda.
12. Waxaa aad loogu talinayaa in loo isticmaalo Antpool (www.antpool. Com) iyo BTC.com (https://pool.btc.com) adeega macdanta.
1. Si looga hortago faafida fayraska kujira qalabka, taas oo waxyeelo u geysan karta taxanaha 'Antminer S19', howsha dejinta ee "Secure Boot" waa la daarnaa oo howsha "Root Authority" ayaa naafo noqotay.
2. Haddii isticmaaluhu ku guuldareysto inuu u isticmaalo sheyga si waafaqsan tilmaamaha la siiyay, qeexitaannada, iyo xaaladaha la bixiyay, ama uu beddelo habsami u socodka iyada oo aan la helin oggolaanshaha hore ee Bitmain, Bitmain mas'uul kama noqonayso wixii waxyeelo ah ee halkaas ka yimaada.
(2-1 Oo ay ku jiraan cabbirka PSU
• Haddii kale, sicirka sarrifka waqtiga dhabta ah ee u dhexeeya doolarka Mareykanka iyo Cryptocurrency ee lagu soo bandhigay Barta lacag bixinta waa la qaadan doonaa
Fadlan akhri Bitmain Shuruudaha & Shuruudaha liiska dhammaystiran ee shuruudaha iyo shuruudaha khuseeya dhammaan amarrada lagu soo rogay Bitmain.com
Muuqaalka Qiimaha Qiimaha Muuqaalka Maya ...
weelka btc, loo adeegsaday qalabka loo yaqaan "crypto", weelka antbox, weelka bitmain, crypto macdanta asic, weelka antminer-ka,